Uluhlu lwamazwe eManyano ngexesha leMfazwe yamakhaya - Iphepha Lokusebenzela Ne Iiprinta
Uluhlu lwamazwe eManyano ngexesha leMfazwe yamakhaya
Imfazwe yamakhaya yaseMelika (e-US) yayiyeyona nto ibalulekileyo kwimbali yaseMelika eyenzeka ngo-1861 ukuya ku-1865 phakathi kwamazwe amanyeneyo kunye ne-Confederate States . Kuyo yonke imfazwe, kwasekwa amazwe amatsha kwaye amanye amazwe atshintsha amacala, yiyo loo nto uluhlu lweZizwe eziManyeneyo lunokukunceda uliqonde ngcono icala loManyano.
Uluhlu lwealfabhethi lwamazwe amanyeneyo kwimfazwe yamakhaya
Kwakukho amazwe angama-20 athathwa njengeManyano kunye neMida emi-5, eyayithathwa njengamanyano omanyano kuba azange ahlukane noManyano. Lilonke, bekukho amazwe angama-25 kubuchwephesha afakwe kwiZizwe eziManyeneyo zeMfazwe yaseMelika. Nangona kunjalo, iWestinia yaseVirginia ayibanga ngurhulumente de kwaba phakathi kwemfazwe, ke iManyano yaqala njengamazwe angama-24. UAbraham Lincoln wayenguMongameli wabo.
Iinyani zokubulela ngokuzonwabisa kunye neMfundo
Uluhlu lwazo zonke izifinyezo ze-50 States
Uluhlu lukaMongameli weeNqaku: I-Trivia enomdla yabantwana
Amazwe oMda weMfazwe yamakhaya
La mazwe mahlanu akazange ahlukane nomanyano, kodwa khange abaxhase u-Abraham Lincoln ekuqaleni. Ekuqaleni kwemfazwe, la mazwe afuna ukuhlala engathathi cala kwaye angakhethi cala. Ngo-1862, i Amazwe akwiMida babengenandlela yimbi ngaphandle kokuba bathathe icala, kwaye baba yinxalenye yoManyano. Nangona kunjalo, abantu abahlala kula mazwe balwa kumacala omabini eManyano kunye nase-Confederate ngokusekwe kwiinkolelo zabo kunye nokunyaniseka.
ukubhengeza ukusweleka kwelungu losapho osebenza nalo
Izintlu eziSimahla eziPrintwayo zaMazwe eManyano
Ungasebenzisa uluhlu olusimahla lokushicilelwa kweManyano ukukunceda ugcine umkhondo wokuba ngubani owayekweliphi icala ngexesha leMfazwe yaseMelika. Ukuba ufuna uncedo lokukhuphela okuprintwayo, jonga eziiingcebiso eziluncedo.
Uluhlu oluprintiweyo lwamazwe aseManyano oManyano
Ngaphambi kokuba i-Confederate States ikhuphe kwi-Union, onke amazwe ayeyinxalenye ye-Union eyaziwa njenge-United States. Le Manyano yaqala ngeenkoloni ezili-13 zoqobo. Sebenzisa olu luhlu ukubona ukuba ngawaphi na amazwe awasungula uManyano ekuqaleni kunye nalapho aba khona.
Uluhlu oluprintiweyo lwamazwe aseManyano kwiMfazwe yombutho
Ungalusebenzisa olu luhlu lwasimahla lwayo yonke i-25 Yemfazwe Yomanyano ithi ikuncede ukhumbule ukuba leliphi ilizwe elahlala liyinxalenye yomanyano kuyo yonke imfazwe.
I-Order yamazwe ajoyine uManyano
Xa ummandla ngamnye yaba lilizwe , yamkelwa ngokusesikweni kumanyano olwalusaziwa njengeUnited States of America. Olu luhlu lubonisa xa i-State War Union State nganye waba yinxalenye esemthethweni ye-Union . Gcina ukhumbule ukuba i-Confederate State nganye yayiyinxalenye ye-Union kwaye amanye amazwe awazange abe ngamazwe emva kweMfazwe yombutho.
I-Delaware: ngoDisemba 7, 1787
EPennsylvania: ngoDisemba 12, 1787
ENew Jersey: ngoDisemba 18, 1787
IConnecticut: ngoJanuwari 9, 1788
EMassachusetts: ngoFebruwari 6, 1788
Maryland: Epreli 28, 1788
INew Hampshire: NgoJuni 21, 1788
ENew York: Julayi 26, 1788
I-Rhode Island: ngoMeyi 29, 1790
IVermont: Matshi 4, 1791
IKentucky: NgoJuni 1, 1792
I-Ohio: ngoMatshi 1, 1803
I-Indiana: ngoDisemba 11, 1816
I-Illinois: ngoDisemba 3, 1818
IMaine: ngoMatshi 15, 1820
EMissouri: Agasti 10, 1821
UMichigan: ngoJanuwari 26, 1837
Iowa: Disemba 28, 1846
IWisconsin: ngoMeyi 29, 1848
California: ngoSeptemba 9, 1850
IMinnesota: ngoMeyi 11, 1858
I-Oregon ngoFebruwari 14, 1859
Kansas: NgoJanuwari 29, 1861
ENtshona Virginia: NgoJuni 20, 1863
Nevada: Okthobha 31, 1864
Amacala eMfazwe yamakhaya
I-Confederacy yayixhalabele ukwahlula phakathi kwamakhoboka kunye namazwe asimahla kunye nemicimbi yamalungelo amazwe. La mazwe akumazantsi ebengasaziva ukuba amelwe kurhulumente. Isiphumo saba buhlungu Udabi lasekuhlaleni Oko kwaqhubeka de kwangunyaka we-1865. Ilizwe, uluntu, kunye neentsapho zahlulwa ngokwahlukeneyo njengamazwe namazwe athabatha icala.
Yintoni i-Union State?
Inkcazo ye-Union State ngexesha leMfazwe yamakhaya yiyo nayiphi na imeko eyamkelwe ngokusemthethweni engakhange ihlukane neManyano. La mazwe ngokubanzi ayegxile kwisiqingatha somntla welizwe, esebenza phantsi kolawulo luka-Mongameli Abraham Lincoln, kwaye azibiza ngokuba yi-United States of America.
Amazwe asixhenxe aManyeneyo aManyeneyo
Emva kuka-Abraham Lincoln Umongameli onyuliweyo waseMelika ngo-1860, amazwe asixhenxe akumazantsi aphuma kuManyano kwaye enza i-Confederate States of America. Babenjalo:
I-Alabama: Ikhuselekile ngoJanuwari 11, 1861
IFlorida: Ikhutshiwe ngoJanuwari 10, 1861
IGeorgia: Ikhutshiwe ngoJanuwari 19, 1861
I-Louisiana: Ikhutshwe ngoJanuwari 26, 1861
I-Mississippi: Ikhutshwe ngoJanuwari 9, 1861
ISouth Carolina: Ikhutshiwe ngoDisemba 20, 1860
I-Texas: Ikhutshiwe ngoFebruwari 1, 1861
Kamva i-Confederate States
Ngo-Epreli 1861, emva kwemfazwe e-Fort Sumter, amanye amazwe amane ajoyina i-Confederacy. Oku kuthetha ukuba i-Confederacy inamazwe ali-11 ewonke. Babenjalo:
I-Arkansas: Ikhutshiwe ngoMeyi 6, 1861
North Carolina: Ikhutshiwe ngoMeyi 20, 1861
I-Tennessee: Ikhutshiwe ngoJuni 8, 1861
IVirginia: Ikhutshiwe ngo-Epreli 17, 1861
Imephu ye-Union kunye ne-Confederate States
Ukufumana umbono olunge ngakumbi othi leliphi icala, jonga kwimephu yamazwe ngexesha lemfazwe yamakhaya. Uyabona ukuba i-Oregon kunye neCalifornia zazizimele ngokukodwa kuManyano.
Umanyano lwaMazwe naBantu
Ngelixa i-Union ithi yayingamanyananga ngokupheleleyo, babambana ngeendlela ezininzi ngexesha lemfazwe yamakhaya yase-U.S. Ekugqibeleni, i-Union ithi iphumelele, kodwa abantu kumazwe amaninzi bayaqhubeka nokubonisaIkratshi elidibeneyonamhlanje.
Ukuthenga I-Engagement Ring I-Makeup Izixhobo Umtshato Proposals Ubunzima Ubunzima Ukuzivocavoca Iselfowuni Iifowuni
Ingaba imoto inobunzima obungakanani?
ngawaphi amacala ahamba nemilenze yononkala
ukugqojozwa impumlo ezimbini kwelinye icala
Izibonelelo zomhlaza wamabele zaseMelika
athini amanqanaba okugqibela okusilela kwezintso ezinjeni?